Ukunakekelwa Kwekhasimende +
I-Master Link nomhlangano
Izidingo Zobuchwepheshe Bokuphepha Kwe-CE Certification Hook
Indlela yokuphakamisa amandla kagesi ye-hook, ngezikhathi eziphindwe ka-1.5 umthwalo olinganisiwe njengokuhlolwa komthwalo wokuhlola. Indlela yokuphakamisa i-hook yamandla aqhutshwa, izikhathi ezi-2 umthwalo olinganisiwe njengokuhlolwa komthwalo wokuhlola. Susa isivivinyo somthwalo we-hook, akufanele ube nokukhubazeka okusobala futhi wandise izinga lokukhubazeka, o ...
I-Matte Black Bow Type Anchor Shackle ene-Screw Pin
Kwenziwe ngentando Matte ihange emnyama isibopho nge izikhathi 6 ukuphepha isici sokwakha esiteji Rigging ingxenye kufaka ihange amaketanga, izingwegwe clevis, iso izingwegwe, oxhumanisa izixhumanisi, master izixhumanisi, grade 8 amaketanga ayisebenzisi nje kuphela ephakamisa umkhakha noma uwoyela & igesi umkhakha, singenza futhi kubo b ...
I-DSL (i-Hebei Shenli Rigging Co., Ltd) ikumema ukuthi ulandele idokodo le-15.4h23 le-128th Online Canton Fair.
Ubhadane oluqhubekayo lwe-COVID-19 olugubuzela umhlaba wonke luphoqe ukuthi kuhlehliswe uhlelo lwesi-127 lweCanton Fair. Ngemuva kwezinyanga ezimbili zokulungiselela, i-128TH CANTON FAIR izobanjelwa bukhoma ku-inthanethi ngomhlaka 15June DSL - Hebei Shenli Rigging Co., Ltd） ekhethekile ekwenzeni okokusebenza ...
IZIMISO EZIBALULEKILE ZOKUSETSHENZISWA MAYELANA NEZIBOPHO
Amaketanga asetshenziswa nsuku zonke ezinhlotsheni ezahlukahlukene zokufaka izinsimbi nokulayisha. Ngaphambi kokusebenzisa iketanga, kunemithetho eyisishiyagalolunye ebalulekile okufanele uyikhumbule. Umthetho 1: Imisebenzi yokukhiqiza kufanele iqale ihlole ukuthi ngabe kukhona yini ukukhubazeka kuwo wonke amaketanga, ukufaniswa kwemodeli, ukuxhumana kuqinile futhi kuhlobene ...
Ungasisebenzisa kanjani kahle isixhumanisi se-rigging master?
1. Isixhumanisi se-mainmaster esisetshenziselwa ukwakha indwayimane, indophi yentambo, kanye nendwayimane kufanele kube yindandatho ende. Ngezinye izikhathi, iringi eyisiyingi ingasetshenziswa. 2. Isixhumanisi sokuxhuma kufanele sibe yindandatho ende noma i-master link; 3. Akuvunyelwe ukusebenzisa kabusha iringi yokuphakamisa enesici ngemuva kokushisela; 4. I ...
Ungayivimba kanjani iketanga lehange neketango eliboshiwe ekugqashukeni?
Elinye lamazinga okugoqa amaketanga ukwenzeka kwemifantu nokuqhekeka okukhulu. Lo mkhuba uhlupha abantu abaningi. Singakuvimba kanjani lokhu ukuthi kungenzeki? 1. Ngokuya ngendawo yokusetshenziswa, khetha amasilayidi wezincazelo ezifanele namamodeli, gcwalisa ukubhaliswa ...
Ungayigcina kanjani iketanga lokuphakamisa iBanga lama-80 isikhathi eside sokusebenza?
Ukugcinwa kochungechunge lokuphakamisa i-G80 kubalulekile, sincoma lokhu kulungiswa okulandelayo kochungechunge lokuphakamisa: 1. I-sprocket kufanele ifakwe ogodini ngaphandle kwe-skew ne-swing. Emhlanganweni ofanayo wokudlulisa. Ubuso bokugcina beziphethu ezimbili kufanele bube sendizeni eyodwa. Lapho i-c ...
Ikheli: Indawo Yezimboni yaseDonglv, Idolobha laseBaoding, i-Hebei, eChina